Mashiinka Cuntada, Mashiinka Casiirka Khudradda, Mashiinka Suugada Yaanyada - JUMP
Khadka Wax Soo Saarka Cab
Khadka Wax Soo Saarka Cuntada
Jam Paste & Khadka Sharoobada
Cunto & Cabid
Burburiye & Juicer
Nadiifinta Nadiifinta & Goynta
Karinta qalajinta & shiilan
Buuxinta shaabadaynta & xirxirida
Isku qasida Jeermiska iyo sameynta
BULSHADA MAKIINADDA (SHANGHAI) LIMITED waa teknoolojiyad casri ah oo wada jir ah oo ka kooban shirkado, tii hore waa Shanghai Warshadaha Mashiinka Warshadaha, taas oo ku takhasustay xariiqda muhiimka ah ee ka baaraandegista casiirka miraha isku urursan, macaanka, saxarka, miro kuleylka lagu farsameeyo, buuxinta kulul cabitaanka casiirka miraha, geedaha ama cabitaanka shaaha, cabitaannada kaarboon, caano fadhi, jiis iyo warshad caano dareere ah oo ka baaraandegta. Shaqaalaheenu waxay leeyihiin akhlaaq wanaagsan oo wanaagsan, injineerada xirfada leh, farsamayaqaanada iyo shaqaalaha R & D waxay si toos ah uga socdaan warshada asalka ah ee mashiinada cuntada, sidoo kale waxay leeyihiin dhowr sayid iyo Ph. D ee injineernimada cuntada iyo mashiinada baakadaha, sidaa darteed si buuxda ayaan u qalabaysanahay. iyada oo leh awood dhameystiran oo ah qaabeynta iyo horumarinta mashruuca oo dhan, soosaarida, rakibida Komishanka, tababarka farsamada, adeegga iibka kadib iyo dhinacyo kale.
Qalabka jikada waxaa loola jeedaa qalabka iyo qalabka la dhigo jikada ama wax lagu kariyo. Qalabka jikada badanaa waxaa ku jira qalabka kululaynta, qalabka wax lagu karsado, jeermiska iyo qalabka wax lagu nadiifiyo, heerkulka caadiga ah iyo qalabka keydinta heerkulka oo hooseeya. Meelaha waxqabadka jikada ee warshadaha wax-u-qabashada waxay u qaybsan yihiin: bakhaarka cuntada ee muhiimka ah, bakhaarka cuntada ee aan caadiga ahayn, bakhaarka alaabada qalalan, qolka cusbada, qolka rootiga, qolka cuntada fudud, qolka saxanka qabow, qolka wax soo saarka aasaasiga ah ...
Tufaaxa, pear, cinabka, po ...
Tufaaxa, pear, cinabka, mashiinka rummaanka ka baaraya iyo khadka wax soo saarka ayaa ku haboon ka shaqeynta tufaaxa, pear, cinabka iyo rummaanka. Waxay soo saari kartaa casiir saafi ah, casiir xamaasad leh, casiir urursan, budada miraha, miraha macaanka. Khadka wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay wiishka xoqida, nadiifiye xumbo, nadiifiye burush, preheater, mishiinka wax soo saara, jajab, beater, juicer, juicer suunka, qashin jiif ah, centrifuge balanbaalis, qalabka ultrafiltration, qalabka sifeynta, xayeysiis cusbi ...
Olive, plomme, bayberry, miro guduud, abrikot, mashiinka processing tubta iyo line-soo-saarka ku habboon yahay ee laga baaraandego of saytuun, tubta cagaaran, bayberry, miro guduud, khudaar iyo tubta. Waxay soo saari kartaa casiir saafi ah, casiir qalafsan, saxarka asalka ah, casiir urursan, qashir urursan, budada miraha, miraha macaanka, khal khal iyo alaabooyin kale. Olive, plum, bayberry, miro guduud, abrikot, mashiinka wax soo saarka tubta iyo khadka wax soo saarka waxaa inta badan ka kooban mashiinka nadiifinta, wiishka, jeermiska UV, ka saarista nukliyeerka, garaacista ...
Buluug, madoobe, ...
Blueberry, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, red bayberry, mashiinka wax lagu farsameeyo karamberriga iyo khadka wax soo saarka ayaa soo saari kara casiir saafi ah, casiir xamaasad leh, juus isku urursan, budada miraha, miraha macaanka iyo alaabada kale. , Mashiinka hubinta, juicer bacaha hawada, taangiga enzymolysis, decanter, ultrafilter, homogenizer, mashiinka faleebada, mashiinka nadiifinta, mashiinka buuxinta, Mashiinka caadiga ah iyo qalabka kale ee qalabka. Tani ...
Cambaha, cananaaska, baba ...
Waxay soo saari kartaa casiir saafi ah, casiir xamaasad leh, casiir urursan, budada miraha, miraha macaanka. Khadkan waxaa ka mid ah mashiinka nadiifinta xumbada, sagxadda, mashiinka xulashada, mashiinka nadiifinta burushka, mashiinka goynta, mashiinka wax soo saara, diirka iyo mashiinka denudation, jajabi, suunka juicer, kalasooca, qalabka fiirsashada, mashiinka nadiifinta iyo mashiinka wax lagu buuxiyo, iwm. Khadkan wax soo saarka waxaa loogu talagalay fikradda horumarsan iyo darajada sare ee otomaatiga; Qalabka ugu muhiimsan dhammaantood wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo tayo sare leh, wh ...
Waxyaabaha yogurt-ka ee suuqa yaala badanaa waa ...
Badeecada ugu dambeysa: miraha la qalajiyey budada, la qalajiyey v ...
Biyo Saafi ah Saadaalinta M ...
qulqulka mashiinka soosaarida biyaha saafiga ah: Biyaha ceeriin ...
Cabitaanka Kaarboonka leh ...
Cabitaannada kaarboon-kaarboon, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ...
Qalabka Cabitaanka Iyo ...
Casiirka caadiga ah ee kala duwan: casiirka tufaaxa, bambeelmo j ...
Mashiinka Baastada Iyo Mashiinka ...
Khadka wax soo saarka ee alaabta ceeriin ingre ...
Qaboojiyaha shiilan ee qulqulaya nidaamka socodka qalabka: Li ...
Mashiinka nacnaca jilicsan iyo habka khadka wax soo saarka ...
Isku dhejinta sinnaanta Marka loo eego habka kala duwan ...
Is Beer Cusub Beer ...
Beer iskood loo abuuray waxaa loola jeedaa biirka ay soo saartay o ...
Khadka wax soo saarka jalaatada, Qalabka Jalaatada Machine Mashiinka Waxsoosaarka Ice cream
Qulqulka iyo astaamaha xariiqda wax soo saarka jalaatada, Qalabka Ice cream Machine Mashiinka Waxsoosaarka Ice cream Sida ku cad isku xigxiga geeddi socodka, khadka soo saarista jalaatada wuxuu ka kooban yahay wabi qabow iyo kulul, nadiifiye tubbo, Homogenizer cadaadis sareeya, saxan qaboojiye, mashiinka barafka, makiinada buuxinta , q ...
Soo saaraha sharaabka reer Brazil wuxuu u jeedaa carwada Shiinaha si loo xoojiyo ganacsiga
Soosaaraha reer Brazil ee sameeya miraha kuleylaha dabiiciga ah ee loo yaqaan 'DNA Forest' ayaa doonaya inuu balaariyo ganacsigiisa "dhinaca kale ee adduunka" isagoo kaqeyb qaadanaya China International Expo Expo (CIIE). “Waxay fursad weyn u tahay shirkadeena in carwo sida CIIE ah ay u furan tahay ...